Ajụjụ - Shijiazhuang AoFeiTe Medical Devices Co., Ltd.
1. Kedụ ka m ga-esi nye iwu?
Nwere ike ịkpọtụrụ onye ọ bụla n'ime ndị ahịa anyị maka iwu. Biko nye nkọwa nke ihe ị chọrọ ka o doo anya. Ya mere, anyị nwere ike iziga gị onyinye ahụ na oge izizi.Maka ịmebe ma ọ bụ mkparịta ụka ọzọ, ọ ka mma ịkpọtụrụ anyị na Skype, TradeManger ma ọ bụ QQ ma ọ bụ WhatsApp ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ ozugbo, ọ bụrụ na igbu oge ọ bụla.
2. Kedu mgbe m nwere ike nweta ọnụahịa ahụ?
-Emekarị anyị na-aguputa n'ime 24 awa mgbe anyị nwetara gị ase.
3. you nwere ike ịme ihe ahụ maka anyị?
Eeh. Anyị nwere a ọkachamara otu nwere ọgaranya ahụmahụ na Onyinye igbe, Logo, mbukota akpa na na imewe na Manufacturing.Just na-agwa anyị echiche gị na anyị ga-enyere mepụta gị echiche n'ime zuru okè ngwaahịa.
4. Ogologo oge ole ka m ga-atụ anya inweta ihe nlele ahụ?
Mgbe ị kwụrụ ụgwọ nlele ahụ ma zitere anyị faịlụ ndị akwadoro, ihe atụ ga-adị njikere maka nnyefe na ụbọchị 1-3. The samples ga-ezitere gị site awara awara na-abata na 3-5 days.we nwere ike na-enye ndị sample maka free ụgwọ ma na-akwụ na-eri nke ibu.
5. Kedụ maka oge ndu maka imepụta igwe?
Jiri obi eziokwu, ọ dabere n'usoro ibu na oge ị na-etinye Order.Alway 10-30 ụbọchị dabere na izugbe iji.
6. Kedu usoro okwu nke nnyefe gị?
Anyị na-anabata EXW, FOB, CFR, CIF, wdg ou nwere ike ịhọrọ nke kachasị adaba ma ọ bụ dị ọnụ ala maka gị.
7. Kedu ụzọ ịkwụ ụgwọ?
1) Anyị na-anabata Paypal, TT, Wester Union, L / C, D / A, D / P, MoneyGram, wdg.
2) ODM, OEM iji, 30% n'ọdịnihu, itule tupu shippment.
8.Abụ gị ụlọ ọrụ eziokwu ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa?
Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, anyị nwere ike ịkwado ọnụahịa anyị bụ aka mbụ, Ogo dị elu na ọnụ ahịa asọmpi.
9.Where ebe nrụpụta ihe gị? Kedu ka m ga esi esi gaa ebe ahụ?
Factorylọ ọrụ anyị eburu na Shijiazhuang, China, ị nwere ike ịbịa ebe a site na ikuku gaa ọdụ ụgbọ elu Shijiazhuang ma ọ bụ ọdụ ụgbọ elu Beijing, anyị ga-eburu gị.
10.How ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe si ele ihe anya gbasara njikwa mma?
Iji jide n'aka na ndị ahịa zụta ezigbo mma ngwaahịa na ọrụ n'aka anyị.Before ahịa ebe iji, anyị ga-ezitere ọ bụla samples ka ndị ahịa maka appro.Before Mbupu, anyị Aofeite mkpara ga-elele àgwà 1pcs site 1pcs.Quality bụ omenala anyị.
Ntak emi Họrọ Anyị Aofeite?
1.Real factory na igwe na ndị ọrụ nwere nkà
2.Eriri na mkpara na mba ọzọ ahia, Elu àgwà Service
3.We nwere ike ịnakwere obere iwu na OEM / ODM iji
4. ahaziri Logo, saa labeelu, ngwugwu, agba kaadị, agba igbe anabata.
5. Ọkachamara mmebe na ọkà ọrụ nwere ike na-emepụta ngwaahịa gị pụrụ iche.
6.High larịị mma, na CE, FDA, SGS na asambodo ISO
7.Egbe ọnụahịa na nnyefe ọsọ ọsọ, a na-anabata usoro mbupu niile
8. paymentzọ ịkwụ ụgwọ dị iche iche, LC, TT, Western Union, Gram Money na paypal
9.Long oge ikike na mgbe-ire serive
10.Ọ bụ uche anyị na-eto eto buru ibu na ndị ahịa anyị ọnụ